प्याक्टले किन निकाल्यो गगनका पक्षमा विज्ञप्ति ? - EKalopati
प्याक्टले किन निकाल्यो गगनका पक्षमा विज्ञप्ति ?
काठमाडौं, मंसिर ७ । लाटो खान्छ एक बल्ड्याङ, बाठो खान्छ तीन बल्ड्याङ् भन्ने उखान यतिखेर कृषि विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाका प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्माले काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार भएका गगनलाई राम्रै दनक दिएका छन् ।
व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाबाट रकम लिएर कृषि व्यवसाय गरेका गगन थापाले काम नै नगरी रकम लिएको साधारण समाचारलाई गोविन्दले ठुलै विषयबस्तु बनाईदिएका छन् । गगन थापाले व्ययवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाबाट रकम लिए वा लिएनन् भन्ने कुरा फरक होला तर उनले बाख्रा पाल्छु, मासु पसल खोल्छु भनेर नै प्रस्ताव पेश गरेका हु न् ।
गगन थापाले पेश गरेको प्रस्ताव परियोजनाले नदिने कुरै भएन । गगन थापा मात्र होइनन् अन्य नेताले पनि सो आयोजनाबाट आफ्नै नाममा नभएपनि एकाघरभित्रका परिवारका नामबाट परियोजना पारेका भने छन् । तर गगन थापा किन चर्चामा ल्याईए वा बनाए त्यो कुरा नै महत्वपूर्ण हो ।
गगन थापाले आफूले कृषि तथा जलश्रोत समितिको सभापति भएकै कारण प्याक्ट आयोजनामा परेको परियोजना नलिएको हो भन्नु गलत हो । साधारण किसानले पाउनु पर्ने परियोजनामा गगन थापाले प्रस्ताव हाल्नु भनेको शक्तिका आडमा प्रस्ताव स्वीकृत गराउनु हो भन्दा पनि ठिक हुन्छ ।
गगन थापाले प्याक्टमा परियोजना हाल्नु र स्वीकृत हुनु र रकम लिएको छैन भन्नु झुठको खेती हो भन्दा फरक नपर्ला ।
गगन थापाले जुन जुन योजनाका लागि प्रस्ताव हाले त्यसबाट फाइदा हुने नदेखिएपछि न त गोल्फुटारमा मासु पसल खुल्यो न त बाख्रा पालन नै भयो । तर पाउनु पर्ने स्वीकृत परियोजनाको रकम भने माग गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी प¥यो । जव अख्तियारमा उजुरी प¥यो तव मात्र गगनले काम नभएकाले रकम भुक्तानी लिन्न भन्ने निवेदन समेत पेश गरेका हुन् ।
किन आयो प्रेस विज्ञप्ति
गगन यतिखेर काठमाडौंमा क्षेत्र नं. ४ बाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्ष उम्मेदवार हुन् । शक्तिमा रहँदा गगनले सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेका उदाहरण मतदातालाई जानकारी हुनु आवश्यक पनि छ । त्यसैले कुनै अनलाईनले गगनका विपक्षमा समाचार प्रकाशन गर्नु जायज छ । प्रकाशित समाचारको चित्त नबुझेमा गगन स्वयंले सो प्रकाशनलाई खण्डन छाप्नका लागि आग्रह पनि सक्छन् । तर त्यसो भएन । गगन थापाले निकाल्नु पर्ने प्रेस विज्ञप्ति नेपाल सरकारको हजारौं रकम खर्चेर प्याक्ट आयोजनाले प्रकाशित ग¥यो । आयोजनाले यसरी व्यक्तिका लागि रकम खर्चेर विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नु नै नियम विपरित छ । आयोजना प्रमुख नेपाली कांग्रेस निकट कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव भएका कारण गगनलाई जोगाउन उनले यो विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका हुन् । जुन विज्ञप्तिले गगन थापाको समर्थन भएन बरु गगन थापाले रकम कुम्ल्याउन खोजेका थिए भन्ने कुराको पुष्टि गरिदिएको छ ।
को हुने गोविन्द शर्मा ?
कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा यतिखेर व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाका निर्देशक हुन् । रामपुर क्याम्पस पढ्दादेखि नै नेपाली कांग्रेस निकट रहेरका उनी कृषि विकास मन्त्रालयका विभिन्न कार्यालयमा रहेर काम गरे । आफूलाई अत्यन्तै विद्धान देखाई टोपल्ने शर्मा प्याक्टमा आउनु अघि तरकारी विकास निर्देशनालयमा कार्यक्रम निर्देशकका रुपमा कार्यरत थिए । एक बर्ष अगाडि मात्र अष्ट्रेलियामा पढेर फर्केका उनी कृषि विभागको महानिर्देशकका लागि लागेको थिए । अघिल्लो सरकारका पालामा गौरीशंकर चौधरी कृषि मन्त्री हुँदा उनलाई प्याक्ट आयोजनामा ल्याइएको थियो । अहिले प्याक्ट आयोजना सकिन लागेको र कृषि मन्त्री पनि आफ्नै भएकाले उनी अहिले प्याक्टबाट सरुवा भएर कि महानिर्देशक कि मन्त्रालयको नीति तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखाको प्रमुखका रुपमा सरुवा हुन चाहिरहेका छन् । अहिले गगनका पक्षमा सरकारी रकम खर्चेर विज्ञप्ति निकाल्न उनलाई गगन थापाले नै निर्देशन दिएको र सोही बमोजिम गरिएको बताइएको छ ।
गगनको आयो धुर्मुसको पनि आउँछ विज्ञप्ति ?
व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना किसानका लागि भन्दा पनि नाम चलाएर कृषि व्यवसाय गरे जस्तो गर्नेहरुको लागि हो कुरा आयोजनामा परियोजना पार्ने व्यक्तिहरुबाट नै प्रष्ट भएको छ । अहिले गगन थापाको चर्चा चलिरहँदा उनका पक्षमा प्याक्टले हजारौ सरकारी रकम खर्चेर रकम नलिएको पुष्टि गर्न खोजिरहेको छ । सञ्चार माध्यममा समाचार आएकै कारण सरकारी निकायले व्यक्तिका लागि सरकारी रकम खर्चेर विज्ञप्ति निकाल्न मिल्छ । आयोजना प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्माले विज्ञप्तिको रकम आयोजनाबाट नै भुक्तानी गर्न पाउँछन् ? यदि उनले गगनका पक्षमा निकालिएको विज्ञप्तिको भुक्तानी प्याक्ट आयोजनाबाट गरे भने त्यो अख्तियारी दुरुपयोग गरिएको हुने छ ।
यसै प्रसंगमा अहिले गगनसँगै अनुदान लिन प्रस्ताव स्वीकृत गरेर काम नगर्ने व्यक्ति हाँस्य कलाकार सीताराम कट्टेल पनि हुन् । सीताराम कट्टेलले पनि प्याक्ट आयोजनाबाट रकम लिएर बंगुर पालन गर्ने भन्दै लाखौं रुपैयाँ लिएका छन् तर उनले प्याक्टबाट रकम लिईसकेपछि बंगुर पालन पाल्न छाडेका छन् । धुर्मुसले प्याक्टबाट लिएको रकम दुरुपयोग भएको छ । यदि दुरुपयोग भएको छैन भन्ने हो भने प्याक्ट आयोजनाले धुर्मुस अर्थात सिताराम कट्टेलको बंगुर फार्म कहाँ छ खोज्नु पर्दछ । नत्र व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाका आयोजना निर्देशक गोविन्द शर्माले फेरि अर्को विज्ञप्ति निकाल्नु पर्ने देखिन्छ । गगनको विज्ञप्ति आउने धुर्मुसको किन नआउने ? –विपी अराजक
Previous articleएक मत बटुल्न चार हजार खर्च, तीन दिनको यात्रा
Next articleगगनको विज्ञप्ति आउने धुर्मुसको किन नआउने ?